Seenaa irratt qabattee gabaabduu – Welcome to bilisummaa
Onkoloolessa 16, 2014 (Gubirmans) — Duulli Oromoo jaarraa 16faa keessa Laga Gibee fi Baaroo gidduu qubate Odaa xixinnoo fi bulcha sirna Gadaa irraa maqe dhaabbachuutti ka’e. Keessaammo kanneen dhiddheessa gamanatt hafan sirna mooti irratt hundaawe ijaarratan. Dhugeeffannoos kan dudhaan adda tahe guddifatan.
Jimma, Gomma, Limmuu fi Gumaan hidhata walgargaarsaa tokko ummatanii turan. Jarri kun “Afran Naggaadotaa” jedhamu turan. Isaan irraa gara lixaatt kan jiran Gabbaa, Haannaa, Leeqaa fi Nooleen sirna dudhaa guutummaatt akka jara kanaa hin gaddhiisne. “Afran Oromoo” jedhamu turan. Buunnoon isaan keessatt argama. Murni lachanuu naannicha humna tokko jala galchuuf lola hedduu haa gaggeessan malee dubbii hubachuutt yoo ka’an nagaan tokkummaa uummachuu yaaluu eegalan. Garuu utuu hin xumuratin humni Habashaan Raas Tasammaa Naadon hogganamu gargar baasee gad ciruun tokko tokkoon of jala galche.
Tags Afran Oromoo seenaa
Previous Diimaa Nagawo Finfinnee Gale
Next Qabeenyi ABO Shanee Gumii Saamamuu isaa ammaan dura isiniif ibsineeti turre.